DAHABSHIIL: Cabdirashiid Ducaale waa Samafale ku Dayasho Mudan. - Wargane News
Home Opinion DAHABSHIIL: Cabdirashiid Ducaale waa Samafale ku Dayasho Mudan.
DAHABSHIIL: Cabdirashiid Ducaale waa Samafale ku Dayasho Mudan.
Markuu dhacay taliskii Siyaad Barre, adeeggii guud ee xukuumadda iyo xakamayntii ganacsiga (Commercial Restrictions), ay meesha ka baxeen, waxaa dalka ka curtay habka ganacsiga suuqa xurta ah (Free Market). Taasina waxay tartan xooggan oo ganacsatada dhaxmaray, soona dedajiyay dhisidda dalka, kana dhigtay mid dhinacyo fara badan uga horreeya dalalka nala deriska ah.
Waxaa sida ubax dayreed u soo baxay shirkaddo xawaalad, isgaarsiin, koronto, dhismo, warshado, diyaarado iwm. Shirkadaha kor ku xusan, waxaa ugu caansan, uguna mug weyn Shirkadda Dahabshiil Groups, taasoo ka hawlgasho degaannada Soomaalidu degto oo idil, faracyana ku leh waddamada gobolka iyo caalamka intiisa kale.
Shirkadda Dahabshiil waxay kuwa kale uga duwan tahay waa mid aasaaskeeda uu lahaa qoyska Cabdirashiid Maxamed Saciid oo ah qoys xalaalmiirato ah, kana soo bilaabay ganacsigiisa dukaan yar oo ku yiilay magaalada Burco, una soo dhabaradeegay, Ilaahna uu u barakeeyay ganacsigooda ay ku saleeyeen aqoon iyo amaano. Soomaaliduna waxay tiraah: Ma hungowdo daacadi.
Shirkaddaan waxay wax weyn ka qabatay shaqo la aanta (Unemployment) ka dhax jirta bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida kaga nooshahay. Shaqo siinta Dahabshiil uma eegto gobolka ama qabiilka uu ka soo jeedo shaqo codsadaha, waayo, Maamulka shirkaddaan waa ka indho la` yahay qabiilka (Clan Blind). Halka shirkadaha shaqo bixintoodu ku salaysan tahay ina-adeersi (Nepotism).
Mahad haka gaartee , Dahabshiil waxay suuragelisay inay kumanaan qoysas Soomaaliyeed ay dabkooda shidan karaan kaddib markay shaqo ka heleen shirkaddaan oo u tixgelisay aqoontooda iyo daacadnimadooda.
Shirkadda Dahabshiil, waxaa intaa u sii dheer inay safka hore uga jirto mashaariicda horumarinta dalka sida dhismaha waddooyinka, kaabadaha, dugsiyada, isbitaallada iwm ayadoo marnaba aan u eegeen gobolka laga fulinaayo. Hase yeeshee, tixgelinayso meesha baahida ugu darani ka jirto.
Sidoo kale, Dahabshiil waxay qayb libaax ka qaadataa marka ay dhacaan masiibooyin qaran (National Disasters) sida fatahaada webiyada ama abaaraha ku soo noqnoqdo dalkeeda.
Doorkeeda iyo sida degdega ah oo ay wax mug leh ugu deeqdo waa mid ka yaabsaday dad fara badan.
Deeqsinimada Shirkadda Dahabshiil, waxaa ka dambeeyo nin Eeebbe ku manaystay qalbi naxariis leh iyo gacan deeqsi, waana waxa muumulaha shirkaddaan Cabdirashiid Maxamed Saciid oo ka dhigay samafale kudayasho (Philanthropist Rolemodel) mudan.
Cabdirashiid waxaa laga martiqaadaa shirar ganacsatada gobolka iyo caalamka si looga faa’iidaysto waayo-aragnimadooda, taasoo uu noogu yahay safiir ganacsi (Business Ambassador). Haddii nalagu barto burcadbadeed iyo argagixiso, waxaan leenahay ganacsato aan magacooda ku faani karno.
Bacdamaa Shirkadda Dahabshiil ay ummaddeeda wax weyn u qabato, uguna shaqayso si hagar la`aan ah, waxaa nala gudboon inaan lagacteena ku dirsano. Waxaan kaloo maamulaheeda Mudane Cabdirashiid Maxamed Saciid iyo qoyskiisa u rajaynaynaa inuu Eeebbe ka mid yeelo Billionerada Afrika.